Ogo na ọdịnaya nke ọdịnaya: ROI na Ide ihe pere mpe Martech Zone
Ogo na ọdịnaya nke ọdịnaya: ROI na Ederede obere
Thursday, August 13, 2015 Wednesday, October 14, 2015 Douglas Karr
N'abalị ụnyaahụ, ekwuru m okwu na ihe omume nzuzo dị ịtụnanya maka ndị ọkachamara ọhaneze na ndị na-ere ahịa na New York City, tinyere Agbaze mmiri maka ndị ahịa ha. M tụlere, na omimi, otu nnukwu data si emetụta njem ndị ahịa na otu o si emetụta usoro anyị dị na ntanetị. Okwu a na-ewu ewu mere na anyị ji akwụkwọ ọcha jupụtara.
Otu n'ime ajụjụ ndị mmadụ jụrụ m bụ otu ha ga-esi kwenye na onye ndu ha imeziwanye ederede ederede na itinyekwu oge nyocha na imezu usoro ịde blọgụ ha ga-enweta ezigbo nloghachi na itinye ego karịa itinye uche na ọtụtụ blọgụ etinyere. Ihe omuma a site na InboundWriter n'ezie na-agwa akụkọ…
Ndabere blọgụ na-efu ụlọ ọrụ $ 900 na ihe karịrị 90% nke post posts anaghị ewepụta nsonaazụ
Anaghi m emegide nzighari frequent anyi na eme nkwusa ntụgharị, ugboro na mkpa ka anyị na-ekwu maka ịde blọgụ ụlọ ọrụ. Ugboro dị mkpa n'ihi na ị na-ewulite ndị na-ege ntị na obodo ị na-atụ anya ya. Oge bụ nnukwu ihe n'ịgụ akwụkwọ, ịkekọrịta, na iwulite ntụkwasị obi na ikike n'etiti ndị na-ege gị ntị.
Mana ọ nweghị ihe ọ pụtara ma ọ bụrụ na ịnweghị iso ndị na-ege gị ntị.
Anyị na-na-na tinye n'ọrụ InboundWriter iji nyere anyị aka na usoro a maka ọnwa ole na ole gara aga. Mmetụta nke nyocha isiokwu dị mma, ịkwado ya na ndị na-ege gị ntị, na ijide n'aka na ị nwere ike ịsọ mpi na isiokwu a dị oke mkpa.
InboundWriter na-esochi nke nkekọrịta na nchịkọta iji nye a siri ike arụmọrụ metric na bụla mpempe ọdịnaya ị dee. Ọbụghị naanị nke ahụ, ọ ga - atụle ya na ịgụ akwụkwọ gị niile.
Were post a dịka ọmụmaatụ! Emere m nyocha nke isiokwu ahụ, ọ dị ndị na-ege m ntị mkpa, yana otu m nwere ike isi merie:
Na nyochaa isiokwu ahụ, ntinye ederede dị mfe karịa nke nwere ike ịmetụta mmetụta dị ịrịba ama. N'ihi ya, m gbanwere aha m na post slug iji dakọtara.
Nsonaazụ ahụ? Na mkpokọta, ebe ọ bụ na tinye n'ọrụ InboundWriter,, anyị ahụla ebe ọ bụla n'etiti 200% na 800% mmụba na njikọ aka na ọdịnaya anyị. Chee echiche banyere nke a - naanị na nyocha pere mpe n'ime isiokwu kwesịrị ekwesị, anyị na-enweta nnukwu nloghachi na itinye ego. N'aka ozo, oburu na anyi choro idalata nzipu ozi anyi (dika otutu mgbe anyi na ndi ahia na-aruko oru), anyi ka nwere ike iguzogide ogugu anyi na aka anyi.
Enwere ike ịlaghachi na ntinye ego na obere ederede!
Tags: inboundwriterọdịnaya ọdịnayaoke ọdịnayanke ukwu na nke ukwu
Ahụhụ Mmiri - Anụmanụ Nchịkọta Na-aga Akwa Oke Anya
Ọgbọ CDN nke ọzọ ga - enwe Ihe karịrị Caching
Aug 17, 2015 na 9: 53 AM
Na elu see okwu i nwere “The nkezi blog posts efu a ụlọ ọrụ $ 900… ma ihe karịrị 90% nke blog posts na-emepụta ihe ọ bụla bara uru azụmahịa pụta.” Na-efu “adịghị”?
Aug 17, 2015 na 1:12 PM
Doh! Emelitere. Daalụ Twila!